I-Galaxy M40 iya kuba nombala wombala obekiweyo obizwa ngokuba yiCocktail Orange | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Galaxy M40 iya kufumana uhlelo olulinganiselweyo lwemibala ye-Amazon Prime Day
Nge-15 ezayo kaJulayi, ihlobo lasehlotyeni elimnyama liza kuqala, elingengomnye umsitho ngaphandle kosuku lwe-Amazon Pime Day. Oku kuya kuqhuba kude kube ngoLwesibini, nge-16 kaJulayi, ke izibonelelo eziza nazo azihlali ixesha elide. Kodwa akukho ntengiso kuphela kulo msitho; Izixhobo ezilinganiselweyo zezixhobo kunye neetheminali zihlala zikhutshwa, ezinje ngombala omtsha I-Galaxy M40.
Igama le-Samsung eliphakathi kwinqanaba liza kubonisa i-facade entsha. Esi sixhobo, ngezo ntsuku zimbini, siya kunikwa ngombala omtsha, obizwa ngokuba yiCocktail Orange, kwaye iya kuba yindawo yokubaleka kwabo bafuna ukuyikhetha kodwa hayi kwezi zimbini ziluhlaza sele zikhona.
Ukwenza uphononongo oluncinci, kufanele kuqatshelwe ukuba i-Galaxy M40 yasungulwa phakathi kuJuni. Ngaphandle kwebhokisi, i-smartphone yanikezelwa ngemibala emibini ekhethiweyo: Midnight Blue kunye noLwandle oluhlaza okwesibhakabhaka. Zombini zinobuhle obuhlaza okwesibhakabhaka kunye nembonakalo ethile enika ubunewunewu, enomtsalane, ebukekayo kwaye iyathandeka kwinkangeleko yamehlo.
I-Galaxy M40 kwi-Midnight Blue kunye nemibala yoLwandle yaManzi oLwandle
Inguqulelo entsha yeCocktail Orange color inikezela ngethoni epinki kuneorenji., eneneni, okanye ubuncinci yile nto sinokuyibona kwipowusta yentengiso. Imodeli iya kufumaneka kumalungu eNkulumbuso eIndiya ngeAmazon Prime Day, ngokokutsho kwayo. GSMArena. Ithegi yexabiso eza kuza nayo iya kuba yi-19,990 rupees, elingana nama-euro angama-258 kunye ne- $ 291 kutshintsho.
I-Samsung Galaxy M40 iza nefayile ye Isikrini se-6.3-intshi Super AMOLED kunye ne-infinity-O notch kunye nesisombululo se-FullHD + sama-pixels angama-2,340 x 1,080, iprosesa Snapdragon 675 isuka kwiQualcomm, i-RAM ekhankanyiweyo kunye neROM, ibhetri eyi-3,500 mAh ngenkxaso ye-15 W yokutshaja ngokukhawuleza, i-32 MP + 5 MP + 8 MP yekhamera kathathu, i-16 MP ngaphambili sensor kunye ne-Android Pie.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Galaxy M40 iya kufumana uhlelo olulinganiselweyo lwemibala ye-Amazon Prime Day
Ukucoca umfanekiso omtsha weGlass Watch Active 2
IXiaomi Mi A3: Iifoto ezivuzayo kunye neenkcukacha